Poster Maker, Flyer Designer, Ads Page Designer Android အတွက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ပိုစတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား, Flyer ဒီဇိုင်နာ, ကြော်ငြာစာမျက်နှာဒီဇိုင်နာ
ပိုစတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား, Flyer ဒီဇိုင်နာ, ကြော်ငြာစာမျက်နှာဒီဇိုင်နာ APK ကို
ကြော်ငြာ၊ ကမ်းလှမ်းချက်ကြေငြာချက်၊ သင်၏ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ရုံးနှင့်လူမှုရေးဆိုဒ်များအတွက်ဓာတ်ပုံများဖုံးအုပ်ချင်ပါသလား။ ဟုတ်လျှင်ဤသူသည်သင်တို့အတွက်နဖူးစည်းစာတန်းဖန်တီးသူဖြစ်သည်။
အံ့သြဖွယ်နောက်ခံ, texture, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ဖောင့်, စတစ်ကာတွေနဲ့သွားလာရင်းမြှင့်တင်ရေးပိုစတာများ, ကြော်ငြာ, ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြေညာချက်များ, အဖုံးဓါတ်ပုံ Create နှင့်သင်ချင်သောအာရုံကိုရယူပါ။
Poster Maker / Flyer Designing App သည်သင်၏ပုံမှန်ပို့စ်များကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဖန်တီးမှုပိုစတာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးမည့်သာမန်ထက်ထူးကဲသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအချည်းနှီးသောနောက်ခံများကိုဆွဲဆောင်သောပိုစတာများအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်သည့်အထိရောက်ဆုံးသောကိရိယာများရှိသည်။ ၎င်းသည် 120 + နောက်ခံရွေးစရာများနှင့်ကွဲပြားသောအချိုးအစားအလိုက်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းပိုစတာကိုထောက်ပံ့ပေးသော All-in-one app တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူမှုမီဒီယာတွင်လွယ်ကူစွာမျှဝေရန်ရွေးစရာများမှတဆင့်လူတိုင်းကမင်းရဲ့ဖန်တီးမှုကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
ပိုစတာကိုဖန်ဆင်းသော app ကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ခုလွယ်ကူသည်, ရုံသင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအတိုင်းအချိုးအတွက်ကြိုက်နှစ်သက်နောက်ခံကို select နှင့်ပိုစတာဒီဇိုင်းဖောင့်နှင့်သင်၏စာသားမ add, (အထူးပိုစတာချမှတ်ခြင်းဘို့ကောက်ယူ) အံ့သြစရာစတစ်ကာများထည့်ပြခန်းမှသင်၏ဓာတ်ပုံများကို add ပြီးပြည့်စုံဖန်တီး ပိုစတာအခါတိုင်း။
နဖူးစည်းစာတန်း / လက်ကမ်းကြော်ငြာများ / ပိုစတာပြုလုပ်သူများသည်အနုပညာကိုရိုးရှင်းစေသည်။
- အံ့သြဖွယ် Fonts တန်ချိန်နှင့်အတူဓါတ်ပုံများတွင် Write စာသား
- ပိုစတာများ Create
- Advertising ကြော်ငြာပစ္စည်းများ Create
- Flyer Create
- ပရိုမိုးရှင်း Creative Create
- Brouchers Create
- Quotes ပိုစတာ Create
- ဖိတ်ကြားလွှာပိုစတာများ Create
- လူမှုမီဒီယာရေးသားချက်များ Create
- Festa Junina ပိုစတာများ
- စာသားညှိနှိုင်းမှု၊ စာလုံး၊ အရောင်နှင့်ဆိုးကျိုးများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပိုစတာကိုကောင်းစွာညှိပါ။
- အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစတစ်ကာများ (ပိုစတာပြုလုပ်ရန်အထူးရွေးချယ်သည်) ထည့်ပါ။
- SD Card တွင်သိမ်းပါ
ပိုမိုကောင်းမွန်သောပိုစတာများကို ဖန်တီး၍ ကြိုက်နှစ်သက်ရာများနှင့်ဖောက်သည်များပိုမိုရယူပါ။ ယခုအခမဲ့ကြိုးစားပါ !!!
29.93 ကို MB
Flyer, ပိုစတာများ, ...
Logo Maker Pro - …
Canvas: ဂရပ်ဖစ် ...